Iindaba - Zingaphi iikhilomitha zokutshintsha ii-brake disc ngalo lonke ixesha?
Zingaphi iikhilomitha zokutshintsha ii-brake disc ngalo lonke ixesha?
Kuthiwa iipads zebreyiki azilungiswanga ukuba zingatshintsha kangaphi. Kuxhomekeka kwiimeko zokuqhuba kunye neendlela zokuqhuba. Le mikhwa iya kuchaphazela ukusetyenziswa kweepakethe zokuqhekeza. Ukuba unokuyazi kakuhle, uya kufumanisa ukuba kwiimeko ezininzi akukho mfuneko yokuba unyathele iziqhoboshi konke konke. Ukuba ifilimu isetyenziswe kakuhle, inokufikelela kwiikhilomitha ezingama-100,000.
Ke, phantsi kwaziphi iimeko ekufuneka ubuyisele iipads zebreyiki, ungaya kolu hlolo luqhelekileyo, kwaye ubeke endaweni yazo ngokukhawuleza ukuba ziyahlangabezana neemeko.
1. Jonga ukutyeba kweepakethe zokuqhekeza
Jonga ukuba ngaba iziqhoboshi zebreak zincinci na. Ungasebenzisa isibane esincinci sokujonga kunye nokuhlola. Xa uhlolo lufumanisa ukuba izinto ezimnyama zokuxubana zepads zaqhekeka sele ziza kuguga, kwaye ubukhulu bangaphantsi kwe-5 mm, kuya kufuneka ucinge ngokutshintsha.
2. Isandi sokubamba iziqhoboshi
Ukuba usiva isandi sentsimbi esirhabaxa kwiibhuleki ngexesha uqhuba yonke imihla, kufuneka ubeke ingqalelo ngeli xesha. Le yentsimbi yealam evala iiphedi zebreyikhi sele iqalile ukunxiba idiski yokuqhekeza, ke esi sandi sensimbi sibukhali.
3. Braking amandla
Xa uqhuba endleleni kwaye unyathela i-brake, ukuba uziva unzima kakhulu, kuhlala kukho ukuthamba. Kudla ngokufuneka ukuba ucofe i-brake enzulu ukufezekisa isiphumo sangaphambili se-braking. Xa kusetyenziswa i-brake engxamisekileyo, indawo enyovwayo iya kuba sezantsi. Kungenzeka ukuba iipleyiti zebreyiki ziye zalahleka ngenxa yokungqubana kwaye kufuneka kutshintshwe ngazo ngeli xesha, kungenjalo kuya kubakho ingozi embi.
Zingaphi iikhilomitha zokutshintsha idiski yokuqhekeza?
Ngokubanzi, idiskhi yokuqhekeza iyatshintshwa qho kwiikhilomitha ezingama-60,000-70,000, kodwa iinkcukacha ezithile zixhomekeke kwimikhwa yokusetyenziswa komnini kunye nokusingqongileyo. Ngenxa yokuba wonke umntu uneendlela ezahlukeneyo zokuqhuba, ii-brake discs kunye neepake brake zahlukile. Ngapha koko, ii-brake discs kunye neepads zokuqhekeza zibalulekile ekufuneka zihlolwe ngaphambi kokuqhuba. Ezinye iivenkile ezi-4S zinoxanduva kakhulu kwaye zinokukukhumbuza ukuba ii-brake discs kufuneka zitshintshwe.
Xa iipeyinti zebreyiki zitshintshwa amaxesha amaninzi, ukunxiba ii-brake disc kuyakwanda. Ngeli xesha, ii-brake discs kufuneka zitshintshwe. Iidiski eziqhekezayo kufuneka zitshintshwe emva kokuba iipads ezimbini zokuqhekeza zitshintshwe kutshintsho olunye. Ke ngoko, xa kuthathwa indawo yeepreyikhi zokuqhekeza, ii-disc brake kufuneka zijongwe kwangexesha, zitshintshwe xa zinxibe kakhulu.
Ukongeza kunxibo oluqhelekileyo lwediski yokuqhekeza, kukwakhona ukunxiba okubangelwa ngumgangatho wephedi yokuqhekeza okanye idiski yokuqhekeza kunye nokwenziwa kwemicimbi yangaphandle ngexesha lokusebenza okuqhelekileyo. Ukuba i-brake hub inxitywe yinto yangaphandle, i-groove enzulu okanye indawo enxibe idiski enxibe (ngamanye amaxesha icekeceke okanye ityebile) Kukhuthazwa ukuba ukutshintshwa kuya kuchaphazela ngqo ukhuseleko lwethu lokuqhuba ngenxa yomahluko wokonakala.
Amanqaku okuqwalaselwa kulondolozo lwee-brake discs: Ngenxa yokuba ii-brake discs ziya kwenza ubushushu obuninzi ngexesha lokuqhekeza, sukuyihlamba imoto ngoko nangoko emva kokuba ibrake imoto. Kuya kufuneka ucime i-brake ukunciphisa ubushushu bomhlaba wee-brake discs ukukhusela iidiski ezinobushushu obuphezulu ekudumbiseni ngenxa yokudibana namanzi abandayo. Ukubanda okubandayo kuvelisa ukusika kunye nokuqhekeka. Ukongeza, eyona ndlela yokunyusa ubomi be-brake disc kukugcina umkhwa uqhuba kakuhle kwaye uzame ukunqanda ukuma okungalindelekanga.